AbeGcokama basola uTshatha ngokuchema
KUSUKE umsindo ngokubonakala kukaTshatha noKhuzani ndawonye ekubeni abalandeli besola uTshatha ngokungadlalwa omculo weGcokama Elisha kuSigiya Ngengoma Isithombe: INQOLOBANE YESOLEZWE
ABANEME neze abalandeli bamaskandi ngokungadlalwa kwezingoma zomculi kamaskandi, izinyanga zilandelana.
Kuthiwa umculo weGcokama Elisha sekuyophela izinyanga ezintathu ungadlalwa ohlelweni, uSigiya Ngengoma olusakazwa wuTshatha Ngobe noZimdollar Biyela kanti kusolwa ukuthi lolu hlelo lucheme noKhuzani.
Abalandeli bamaskandi sebehlala bengcofana ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kwiFacebook, lapho kunekhasi labo elihamba phambili.
Kuphinde kuvele ukuthi ukubonakala komphathi wesiteshi osabambile uSbongi Ngcobo, Tshatha uGodo noKhuzani esiteji kuthele usawoti esilondeni kubalandeli beGcokama. Kusolwa nokuthi yikho okudale izimpiko kubalandeli bakaKhuzani abagcine bechomela abeGcokama Elisha.
Enye yezinduna zabalandeli beGcokama Elisha, uMhlawuli Zikhali ithe, sebekhathele ngukuqhoshelwa nokucindezelwa kweqhawe labo emsakazweni. “Ziphelile izinyanga lingadlalwa iqhawe lethu, nakwiFacebook siyahlekwa manje. Sizimisele ukwenza nanoma yini ukulwa nokucindezelwa kweqhawe lethu. Siyazi uTshatha unesandla kulento ngoba siyazi isuka kuphi, sicela umsakazo uyilungise lento,” kusho uZikhali.
Umholi wabo bonke abalandeli babaculi bamaskandi nongachemile namculi, uSizwe Ndlovu oyinduna yabalandeli bamaskandi uthe, sekufikile ezindlebeni zakhe ukungenami kwalaba balandeli. “Bayakhala abalandeli beGcokoma Elisha ngisho ezinkundleni zokuxhumana sekuhlekiswa ngokuthi alidlalwa kuSigiya Ngengoma. Sesike sabhalela emsakazweni sibabikela abaphathi, besingakaphendulwa. Kumele umsakazo ubadlale bonke abaculi, bajabule bonke abalandeli, kukhona abaziyo nasebenobufakazi bokuthi uTshatha uyazeqa izingoma zakhe angazidlali ngenhloso. Sifisa akuyeke lokhu ngoba kuqhatha abalandeli kucindezele nomculi,” kusho uNdlovu.
Lithintwa iGcokama Elisha ngalezi zindaba lithe alikaze likunake nokuthi izingoma zalo azidlalwa ngoba impumelelo yalo ayisancikile kakhulu emculweni, kuningi limatasa ngakho. Ukungena kwezemfashini ngenye yezinto Igcokama Elisha eligxile kuzona nelithi kuthatha isikhathi salo esiningi. “Ngiwumuntu okholwayo, uma umuntu engenza izinto enenhloso embi, okwakhe lokho. UNkulunkulu wangipha umculo ukuthi ngiziphilise ngawo, uma sekubuka abantu bengivalela, bengicindezela, kudinga ngibuye ngikhulume naye. UKhozi FM ngicabanga ukuthi linabaculi abaningi elifuna ukubanika ithuba, mhlawumbe yingakho lisawumisile owami umculo. Abalandeli banelungelo lokukhalaza kodwa ngicela bazame ezinye izindlela zokuthola umculo, bawuthenge bazidlalele ekhaya,” kusho iGcokama Elisha.
Ethintwa uSbongi ucele ukungaphawuli kodwa walalela konke okuphathelene nalolu daba.
Ethintwa uKhuzani uthe, akaliboni nakancane iphutha ngokweseka uTshatha ngoba wuyena yedwa umculi kamaskandi owayemkhankasela amavoti. “Bekuyimina ngedwa umculi kamaskandi obemenyiwe kulezi zindondo, bengingeke ngingameseki esakaza umculo wesintu. Ngifika emculweni ngafakwa wuyena esiteji futhi angikaze ngikufihle ukuthi sisondelene. Abazange bavote bonke laba esebekhuluma kakhulu,” kusho uKhuzani. UTshatha ubengatholakali ocingweni izinsuku zilandelana, wathunyelelwa nomyalezo nemibuzo kodwa wangaphendula. Okhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo, uthe bathanda ukucacisa ukuthi oprojusa nabasakazi abahlangane nezingoma ezidlalwa emoyeni.
“Bakhona abahlanganisa umculo, iSABC ingakuqinisekisa ukuthi ingoma yeGcokama Elisha, Iskororo isohlwini lwezingoma ezidlalwayo. Nezinye ziyadlalwa kwezinye izinhlelo, hhayi kwiSigiya Ngengoma kuphela. UKhozi FM luzohlangana nomculi nabaphathi bakhe njengesicelo,” kusho uMmoni.
Ephetha uMmoni uthe ngeke bangene kwizingxabano zabanye abantu, akazange acacise ngesikhalo sokubonakala kukaKhuzani noSbongi noTshatha ndawonye.